Firefox 64 inosvika pamwe nekuvandudza mukutungamira kwematebhu | Linux Vakapindwa muropa
Firefox 64 inosvika pamwe nekuvandudza mukutungamira kwematebhu
Munguva pfupi yapfuura Mozilla yakazivisa kuvhurwa kweFirefox webhu bhurawuza mune yayo nyowani vhezheni 64, pamwe nenhamba mbozhanhare yeFirefox 64 yeiyo Android chikuva.
Mune iyi vhezheni itsva chinongedzo chitsva chakarongedzwa chakafanana nebasa remaneja, inorerutsa kuongororwa kwekushandisa zviwanikwa nemapeji ega ega uye zvinowedzerwa, uye inobvumira matabo kuvharwa pasina kusiya peji.
1 Chii chitsva muFirefox 64
1.1 Kuvandudzwa kutsva kweFirefox 64
2 Nzira yekuwana sei nyowani Firefox 64 yekuvandudza?
Chii chitsva muFirefox 64
Kuti udane peji "nezve: kuita", bhatani rakapatsanurwa rakawedzerwa kumenyu huru. Mune ramangwana vanoronga kuramba vachivandudza peji.
Kurongeka kweiyo pamusoro pe: peji yekuparara yakagadziriswazve, uko iwe kwaunogona ikozvino kuteedzera yakatumirwa uye isina kutumirwa mishumo yekukanganisa, pamwe nekudzima yakaunganidzwa mishumo kubva kune yemuno dhiraivha.
Iko kugona panguva imwe chete kusarudza akawanda tabo kwakaitwase (Shift kana Ctrl + tinya) kufamba, kunyarara, kuwedzera, kuvhara matabo.
Uyewo Wedzera-pane yemamiriro ekurudziro system yakawedzerwa Ivo vanofanirwa kutariswa kwemabasa nemasevhisi.
Sarudzo yekusarudza kurudziro inoitwa zvichibva pane zvinoitwa nemushandisi paWebhu uye nekufambisa mabasa mubrowser.
Semuenzaniso, kana mushandisi achiwanzo kuvhura akawanda matabhu erumwe rudzi uye oashandisa kazhinji, Firefox inokurudzira kuti vashandise iyo yakapihwa Tabs ficha.
Zvese zvisarudzo pane kusarudzwa kwemazano zvinoitwa munharaunda, pasina iyo data iri kutumirwa.
Yakawedzerwa Kurudziro parizvino yakaitirwa vashandisi veUS chete, saka kune dzimwe nyika ficha iyi ichave ichiuya nekukurumidza.
Uyewo akawedzera kugona kubvisa plugin kuburikidza nemenu yemamiriro inoratidzwa kuburikidza neyekuwedzera bhatani pane iyo pani.
Muchimiro chekutarisa marongero mazhinji emapeji peji (CSS Grid Inspector), maturusi akawedzerwa kuti ashande pamwe neakawanda anowirirana CSS grid (anosvika matatu maGSS grids anotsigirwa panguva imwe chete).
Izvi zvinowedzerwa rutsigiro rweCSS-zvivakwa scrollbar ruvara scrollbar upamhi uye yekugadzirisa iyo ruvara uye upamhi hwe scrollbar.
Kuvandudzwa kutsva kweFirefox 64
Nokuda kwayo mune inoteerera dhizaini dhizaini yakasarudzwa yemhando yemhando inovimbiswa kuti ichengetedzwe pakati pezvikamu.
Yehumwe hunhu hunogona kusimbiswa:
Wakawedzera rutsigiro rwe seti yeInteraction Media Basa reCSS yekuwedzera kuti uone kuvepo kwemidziyo yekuisa uye kugona kwavo. Izvi zvinosanganisira poindi hunhu: gobvu kuti utarise mbeva, yekubata skrini, kana chimwe chishandiso chine pointer.
Iyo WebKit injini yakatarwa chivakwa »-webkit-chitarisiko« yaitwa, iyo inobvumidza kushandisa yechinyakare theme yazvino inoshanda sisitimu pakuratidzira chinhu;
Iyo Window.screenLeft uye Window.screen Kumusoro zvivakwa zvakawedzerwa seWindow.screenX uye Window.screenY zvakafanana.
Ye ServiceWorker, iyo ServiceWorkerContainer.startMessages () nzira inoitwa, uye yeWebRTC, iyo RTCIceCandidateStats.relayProtocol chivakwa.
Nezve zviwanikwa zvinotorwa kuburikidza neCSS (semuenzaniso, kumashure-mufananidzo: url ("http: // ...")), unogona ikozvino kutsanangura yega Referer yekugadzirisa mitemo kuburikidza neReferrer-Policy HTTP musoro.
Bhurawuza plugins akawedzera browser.menus.overrideContext () API yekumisikidza tsika dhizaini yemamenu mameseji.
Mune vhezheni yeiyo Android chikuva, chinhu chitsva chakawedzerwa kumenyu kuendesa zvichemo pamusoro pekuratidzwa zvisirizvo kwemasaiti mufoni vhezheni yeFirefox.
Nzira yekuwana sei nyowani Firefox 64 yekuvandudza?
Iyo inokurumidza nzira yekuwana iyi nyowani Firefox 64 yekuvandudza Iko kurodha pasi tarball iyo Mozilla inopa yakananga kubva kune yayo saiti yekurodha saka inogona kunyorwa uye kuiswa wega.
Zvikasadaro, iwe uchafanirwa kumirira mazuva mashoma kuti iyo dudziro iratidzwe mubrowser kana mune zvinyorwa zvekugovera kwako kweLinux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Firefox 64 inosvika pamwe nekuvandudza mukutungamira kwematebhu
Vagadziri veFreeBSD vanofunga kutamira ZFS kuenda kuZoL "ZFS paLinux"
Linux Kernel x32 dhizaini inogona kumiswa